Marketingdị Mgbasa Ozi Email: Iji Ihe Omume Pụrụ Iche na Usoro Nhazi | Martech Zone
Gburugburu inebọchị Valentine n'afọ a, achọpụtara m otu òtù dị iche iche na-eji obi na usoro isiokwu ha. (Dị ka ihe atụ dị n'okpuru)
Kemgbe ahụ, ahụla m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite iji akara na akara isiokwu ha iji dọta uche onye na-agụ ha. Iji ihe odide pụrụ iche na akara isiokwu bụ otu n'ime usoro email kachasị ọhụrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agba ọsọ ugbu a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwebeghị, enwere ihe ole na ole ị ga-atụle tupu itinye n'ọrụ.
Nke mbụ, ị kwesịrị ikpebi ma iji akara eme ihe ezi uche maka ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ otu a, chọpụta akara kacha mma iji rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa, ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na iji anyanwụ na gị isiokwu mgbe ị na-ekwu okwu banyere kacha ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ ego. Biko mara, ọ bụghị akara niile na-arụ ọrụ na ndị ahịa email niile.
Dị ka ihe ọhụụ, ịchọrọ ijide n'aka na ị gaghị emebiga ya ókè! N'ihi na ọ bụ nke kachasị ọhụrụ na nke kachasị elu, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga ịnwa ndị a. Nke ahụ pụtara, igbe igbe ndị mmadụ debanyere aha gị nwere ike ịmalite ịnwekwu nnabata. Chọrọ ịhazi ma ghara iji ha nke ukwuu na usoro isiokwu gị nke na onye na - agụ ya ịmalite ịtụ anya ya n'aka gị. Ha nwere ike malite itu ya onu ma oburu na o buru akari.
Nọrọ na-ege ntị na Tinye blog. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-akpọ ọkwa dị nkenke gbasara otu esi emejupụta mkpụrụedemede pụrụ iche na usoro isiokwu gị nke ọma.
Tags: ahịrị ederede emailakara emailakara
Jul 27, 2012 na 5: 59 AM
Nke ahụ bụ echiche mara mma Lavon. Daalụ maka ịkekọrịta.